Ụlọikpe Yurop Enyela Aminia Iwu Ka Ha Kwụọ Ndịàmà Jehova Iri na Asaa Ụgwọ Ihe Ha Mere Ha
Ụlọikpe Yurop Enyela Aminia Iwu Ka Ha Kwụọ Ndịàmà Jehova Iri na Asaa Ụgwọ Maka Ihe Ha Mere Ha
AKỤKỌ a si Strasbọg dị na Frans. N’abalị iri abụọ na asaa n’ọnwa Nọvemba afọ 2012, Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ na Yurop kpebiri na gọọmenti Aminia ga-akwụrịrị Ndịàmà Jehova iri na asaa $145,226 (ya bụ, ihe dị ka ₦22,510,030) maka imebi aha ha nakwa maka ego ha mefuru n’ikpe ha na ha. Gọọmenti Aminia dara iwu n’ihi na ha tụrụ Ndịàmà Jehova ndị a mkpọrọ n’ihi na ha jụrụ ịrụ ọrụ agha n’ihi ihe ndị ha kweere.
N’afọ 2005, ụmụ okorobịa iri na asaa a bụ́ Ndịàmà Jehova nọ na-arụ ọrụ ọzọ e nyere ha ebe ọ bụ na ha achọghị ịrụ ọrụ ọ bụla gbasara ịlụ agha. Ma, mgbe ha chọpụtara na ọ bụ ndị agha na-ahụ maka ọrụ ọzọ ahụ e nyere ha, nakwa na ọ bụ ha na-ekwu ihe a ga-arụ, akọnuche ha ekweghị ha rụrụ ọrụ ahụ na-aga. Ha hapụrụ ọrụ ahụ. E mechara nwụchie ha ma maa ha ikpe. E tinyedịrị ụfọdụ n’ime ha n’ụlọ nga, ha anọọ ọtụtụ ọnwa tupu e kpee ha ikpe. A tụkwara mmadụ iri na otu mkpọrọ, ụfọdụ afọ abụọ, ụfọdụ afọ atọ.
Ụlọikpe ahụ na-ahụ maka ihe ruuru mmadụ na Yurop kwuru na iwu akwadoghị ikpe ahụ a mara ụmụ okorobịa ahụ nakwa njichi e jichiri ha. Ihe mere ha ji kwuo otú ahụ bụ na n’afọ 2005, e nweghị iwu Aminia ọ bụla kwuru na onye hapụrụ ebe ọ na-arụ ọrụ e ji dochie ọrụ agha dara iwu. Ụlọikpe ahụ kwuru na Aminia dara iwu dị ná nkebi nke ise nke Nkwekọrịta Ndị Yurop Nwere Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ. Ihe iwu ahụ kwuru gosiri na Ndịàmà nweere onwe ha ikpebi ịjụ ọrụ ọ bụla gbasara agha n’ihi akọnuche ha nakwa na e kwesịghị ịta ha ahụhụ maka ya. Ọ bụ eziokwu na gọọmenti Aminia mechara kweta na ụmụ okorobịa ndị ahụ adaghị iwu obodo, ma ha ekweghị akwụ ha ụgwọ maka ikpe ha ikpe ka ndị dara iwu nakwa maka ijichi ha. N’ihi ya, Ụlọikpe Yurop nyere gọọmenti Aminia iwu ka ha kwuo ụmụ okorobịa ahụ ụgwọ maka ihe ha mefuru n’ikpe ha na ha nakwa maka imebi aha ha.
E biri ikpe a n’oge na-adịghị anya Ụlọikpe Yurop machara Aminia ikpe n’ikpe atọ ha na Ndịàmà Jehova kpere banyere Ndịàmà Jehova ịrụ ọrụ na-abụghị ọrụ agha. N’ikpe anọ a niile, gọọmenti Aminia mesoro Ndịàmà Jehova akọnuche ha na-ekweghị rụọ ọrụ agha mmeso ọjọọ ka hà bụ ndị omekome.
Onye na-ekpechitere Ndịàmà Jehova aha ya bụ André Carbonneau kwuru na “ikpe a Ụlọikpe Yurop mara Aminia ga-eme ka mba ndị ọzọ nọ n’Òtù Na-ahụ Maka Udo na Yurop mara ihe ha kwesịrị ime gbasara Ndịàmà Jehova na-ekweghị arụ ọrụ agha. Otú ahụkwa ka ọ dị mba ndị dị ka Eritria, Saụt Koria, na mba ndị dị n’Ebe Etiti Eshia.”